Ihe nbudata - Geofumadas
Nbudata ngwa nke Geofumadas kwalite ma ọ bụ ngwaahịa nke mmasị zuru oke
Etu esi ebudata AutoCAD 2018 - ụdị agụmakwụkwọ
Usoro mmụta nke AutoCAD na-arụ ọrụ nke ọma maka ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi. Iji budata ụdị akwụkwọ nwata akwụkwọ AutoCAD, ị ga-agbaso usoro ndị a: 1. Nweta peeji nke AutoDesk. Banye na akaụntụ gị ma ọ bụ mepụta nke ọhụrụ. You ga-ahọrọ usoro izi ụdị nke njikọ njikọ: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Na nke a, a bụ m…
Nweta ụdị tempụ UTM na Geographic site na ịkwalite Geofumadas
Maka obere oge anyị ga-enyefe ndebiri "Ntugharị nke njikwa UTM na Geographic", na-akwalite Geofumadas. Na template a ị nwere ike tinye nhazi UTM, dịka ọmụmaatụ: X = 1,740,564.29 Y = 3,396,718.08, na-egosi mpaghara 19 na ugwu. na Spheroid GRS80, na nsonaazụ ị ga-enweta ohere na lonjituudu na ogo, nkeji na sekọnd usoro dị ka ...
Template ike DXF faịlụ site Excel ndepụta nke ihe
N'oge na-adịbeghị anya Juan Manuel Anguita nyere m ụdị ọhụrụ nke ngwa a nke anyị kwalitere na mbụ, mana oge ahụ ahapụla ụfọdụ nsogbu na ụdị ọhụrụ nke Excel. Ojiji ya dị mfe, mana arụ ọrụ nke ukwuu. Ga-abanye ọtụtụ isi ihe, chịkọta x, y, z; Etinyewo m ...
Onu ogugu Sokkia Series 50, Station
Oge ụfọdụ gara aga onye na - agụ ya na - achọ akwụkwọ ntuziaka a, ọnwa ole na ole ka e mesịrị, ọ chọtara ya wee zitere m ya. Iweghachi ihu ọma, ana m eziga ya ebe a ka ibudata. Nke a bụ akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ Sokkia, na Spanish, nke ejiri maka akụrụngwa: Series50RX SET250RX SET350RX SET550RX SET650RX Series50X SET250X SET350X…
The cadastre, kọwara na a na-ewu ewu mbipute
Nke a bụ otu n’ime akwụkwọ ikpeazụ m nwere ịrụ ọrụ na ya. Ọ bụ akwụkwọ nkọwa na, ọ bụ ezie na emere ya maka ihe gbara ya gburugburu, ọ nwere ike ịba uru maka mba ndị ọzọ na ọrụ mgbagwoju anya nke ịkọwa cadastre na nsụgharị nke ndị mmadụ-ma ọ bụ karịa. Ihe…
Nke a bụ ihe atụ nke otu Excel nwere ike isi zipu ọdịnaya na Google Earth. Ọnọdụ bụ nke a: Anyị nwere ndepụta nke nhazi na ntụpọ mpaghara ala (lat / lon). Anyị chọrọ iziga na Google Earth, anyị chọrọ ka ọ gosipụta koodu nke mmasị, ederede ederede n'atụghị egwu, ederede nkọwa, foto nke ...
Babiga Google Earth, si UTM achịkọta
Ka anyị lee ikpe ahụ: Agara m n'ọhịa iji wuo ihe onwunwe, dị ka egosiri na tebụl na-esonụ na achọrọ m ile ya na Google Earth, gụnyere foto ole na ole m weere Ihe amamihe nke template ahụ bụ na ọ na-ewe otu ogbugba: Ọ na-atọghata Nchịkọta UTMa na-achịkọta na nhazi ntụpọ, dịka ọ dị ...
downloads, Apụta, Google Earth / Maps
Dee polygon na bearings na anya site na Excel na Microstation
Afọ ole na ole gara aga, m bipụtara otu isiokwu nke egosiri m otu esi etinye data na Excel iji wuo njem na AutoCAD, na-enweghị ịme usoro niile: @distancia
Fewbọchị ole na ole gara aga, onye na-agụ ya jụrụ m maka MobileMapper 100 Basic Guide Guide.Ọ na-abụkarị akwụkwọ ntuziaka ndị a na diski na-esonyere akụrụngwa zụrụ na Ashtech, yana German, French na Bekee nwere aha: xM100 & 200Platform_GSG_B_es.pdf xM100 & 200Platform_GSG_B_de.pdf xM100 & 200Platform_ .pdf xM100 & 200Platform_GSG_B_en.pdf Ma n'ihi ụfọdụ ndudue site n'aka onye kwesịrị ugbua a chụọ n'ọrụ,…
BiblioCAD, budata ihe nchekwa na atụmatụ atụmatụ AutoCAD
BiblioCAD bụ saịtị nwere ọtụtụ faịlụ dị njikere maka ibudata. Nwere ike idozi ya mgbe ị na - arụ ọrụ ma ọ bụ nye anyị echiche ọhụụ gbasara etu esi emepe ya. Ka anyị lelee ụfọdụ anya: Anyị na-enweta nkọwa zuru ezu nke ụkwụ dịpụrụ adịpụ, nke nwere echiche isometric, ngalaba na atụmatụ. Anyi choro ndi mmadu, osisi ma obu ...
Followinggbaso njikọ sitere na ndepụta gvSIG nkesa, nke taa mere nke ikpeazụ 1.10 gọọmentị, achọtala m saịtị na-atọ ụtọ. Ọ bụ Openarcheology.net, nke, nke Oxford Archaeology na-akwalite, na-achọ ịkwalite iji ngwá ọrụ na usoro n'efu maka nyocha na ngwa na ọrụ ihe ochie. Saịtị, nke kacha ...